नेपाली क्रिकेटलाई जोगाइराख्न डिभिजन टू जित्नैपर्छ : पारस खड्का
न्यूजलय बुधबार ०१, कार्तिक २०७४
काठमाडौं । जारी आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा शीर्ष चारभित्र पर्ने सम्भावना गुमाएपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली डिभिजन टूमा घटुवा भएको छ । नेपाल डिभिजन टूमा घटुवा भए पनि विश्वप छनोटको सम्भावना सकिइनसकेकोले कप्तान पारस खड्काले सन् २०१८ को फेब्रुअरीमा नामिवियामा हुने डिभिजन टूमा उत्कृष्ट....
​एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपमा नेपालको यात्रा टुङगियो
काठमाडौं । इरानमा भइरहेको एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप क्वालिफायरमा नेपालको यात्रा टुङगिएको छ । गएराति भएको खेलमा तुर्क्मिनेस्तानसंग ९–३ ले पराजित हुँदै नेपालको यात्रा यस वर्षको फुटसलमा समाप्त भएको हो ।
नेपालका लागि कप्तान सुरज राउत, निर्मल गुरुङ र नवीन लामाले एक–एक गोल गरेका थिए....
​इंग्लिस प्रिमियर लिगः लेस्टर सिटी र वेष्ट ब्रोमको खेल बराबरी
न्यूजलय मङ्गलबार ३१, असोज २०७४
काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा लेस्टर सिटी र वेष्ट ब्रोमले बराबरी खेल खेलेका छन् ।
घरेलु मैदानमा भएको खेलमा लेस्टर सिटीले वेष्ट ब्रोमसँग एक–एक को बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको हो ।
राबरीपछि आठ खेलबाट छ अंक....
​नेपाल क्रिकेट डिभिडन टु मा घटुवा, विश्वकप खेल्ने सम्भावना कस्तो ?
न्यूजलय सोमबार ३०, असोज २०७४
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेटको डिभिजन टु मा घटुवा भएको छ । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नेपाल र हङकङ्गको दोश्रो खेल रद्द भएपछि नेपाल एक तह घटुवामा परेको हो ।
घटुवामा परे पनि नेपालको विश्वकप खेल्ने सम्भावना भने कायमै छ । अब....
​यु १६ बास्केटवल च्याम्पियनशिपको उपाधी धरानको डिपोलाई
धरान । प्रथम यु १६ बास्केटवल च्याम्पियनशिपको उपाधी धरान १८ स्थित डिपो स्कुलले चुमेको छ । होराइजन क्लवको आयोजनामा आइतवार आयोजित एक दिने प्रतियोगितामा डिपो स्कुलले फाइनल खेलमा यलम्वर क्लव धरान ८ लाई २६-२४ अंकको झिनो अन्तरले पराजित गरेको हो ।
किन रोकियो नेपाल–हङकङबीच आजको खेल ?
काठमाडौ । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत नेपाल–हङकङबीच आज हुने खेल रोकिएको छ । हङकङमा सामुद्री आँधी आउने सम्भावना भएकाले उक्त खेललाई सोमबारका लागि सारिएको हो ।
विश्वकप छनोटमा पुग्ने सम्भावना बढाउन नेपालले हङकङविरुद्धको खेल जित्नैपर्ने दबाब आएको छ । गत शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा....
​पूर्वाञ्चलस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगितामा इटहरीको विजयी सुरुवात
न्यूजलय शनिबार २८, असोज २०७४
इटहरी । झापामा जारी पूर्वाञ्चलस्तरीय बैगुनधरा टि ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा इटहरीले विजयी सुरुवात गरेको छ । आयोजक वैगुनधारालाई हराउँदै इटहरी ग्रीन सिटी क्रिकेट क्लबले विजयी सुरुवात गरेको हो ।
१३९ को लक्ष्य पछ्याएको वैगुनधारा क्लब ७९ रनमै समेटिएको थियो । इटहरीको लागि सिद्धान्त लोहनीले....
​सन्यास लिदै छन् भारतीय क्रिकेटर आशिष नेहेरा
भारत । भेट्रान भारतीय क्रिकेटर आशिष नेहेराले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने भएका छन् । बायाँ हाते फास्ट बलर नेहेराले आगामी नोभेम्बरपछि १८ वर्षे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने भएका हुन् ।
नेहेराले आगामी नोभेम्बरमा घरेलु मैदानमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध हुने पहिलो टि–ट्वान्टी क्रिकेटपछि सन्यास लिने घोषणा गरेका....
उत्तरकोरियाका खेलाडीलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न नदिने- अष्ट्रेलिया
काठमाडौं । उत्तर कोरियाको युवा फुटबाल टोलीलाई अस्ट्रेलियाले आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न नदिन भएको छ । अष्ट्रेलियाले उत्तरकोरियाको फुटबल टोली र खेलाडीहरुलाई प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरेको हो ।
उत्तर कोरियालीले विश्वभरबाट आएको विरोधका बावजुत आणविक कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएकोले विरोधस्वरुप प्योङयाङको टोलिलाई....
​जान्नुहोस्, कुन कुन देश विश्वकपका लागि छनोट भए
काठमाडौं । सन् २०१८ रसियामा हुने विश्वकपका लागि हालसम्म कुन कुन देश छनोट भए होलान् भन्ने कुरा अहिले सबैको लागि चासोको विषय बनेको छ । नेदरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेल्स, चिली जस्ता केही चर्चीत देशहरु भने विश्वकपमा छनोट हुन असफल भएका छन् ।